Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manakatona seranam-piaramanidina any Hawaii? Izay nolazain'ny Governora Ige sy ny filoha Trump
Ny fanidiana ny seranam-piaramanidina ao amin'ny State of Hawaii dia hanidy ny indostrian'ny fizahantany ao Aloha State. Ny fanidiana ny fizahantany dia hidika ho fanidiana ny toekarem-panjakana.
Ny tsy fanidiana ny seranam-piaramanidina, mety hidika ve izany fa mety ho lasa Italia faharoa na Wuhan i Hawaii?
Ny governoran'i Hawaii Ige izao dia miatrika tranga 7 an'ny COVID-19 any amin'ny Nosy Oahu, Maui, ary Kauai. Ny governora Ige dia nanamafy fa ny tranga tsirairay dia nentin'ny olona tonga teny amin'ny nosy lavitra indrindra. Mpizahatany ny ankamaroan'izy ireo.
Hawaii no ivon-toerana mitokana indrindra eran'izao tontolo izao, eo amin'ny 2,390 kilometatra miala an'i California ary 3,850 kilaometatra miala an'i Japon. Soa ihany, na dia lavitra aza izy io (indrindra ny Big Island sy Kauai), dia misy tanàna lehibe (Honolulu) koa ary toerana fizahan-tany sy hotely ary trano fandraisam-bahiny marobe.
"Mazava ho azy fa manahy izahay", hoy ny governora Ige nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany. Feno mpiasam-panjakana sy mpanao gazety ny kaonferansa.
Ny torolàlana CDC dia maniry ny hisarahan'ny olona roa metatra na 2 santimetatra. Ny CDC dia namoaka tondrozotra tsy hanana olona 78 na mihoatra amin'ny toerana iray.
Governo Ige dia nilaza fa miahiahy momba ireo mpandeha mitondra ny otrik'aretina any amin'ny Fanjakana izy avy any amin'ny tanibe Etazonia na any ivelany.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, noresahina ny fomba nanaporofoana fa mpiaro ny sidina Air Canada ho an'ny COVID-19. Mpitsidika an'arivony isan'andro no tonga ao amin'ny Aloha Lazao ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tery izay tsy azo isarahana mihitsy ny fisarahana sy ny habaka.
"Akatona ny seranam-piara-manidina", dia ny fangatahana maharitra ataon'ny mpijery ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany, nandefa izany tamin'ny media sosialy. Rehefa nanontaniana izy dia tsy nilaza ny governora fa tsy manaiky izy. Nilaza izy fa niahiahy izy, saingy tsy nanana fahefana hanidy ny seranam-piaramanidina. Ny fahefana toy izany dia any amin'ny manampahefana federaly.
Androany dia nanontaniana ny filoha Trump momba ny fameperana ny dia an-trano. Nilaza ny filoha fa mety ho safidy io. Angamba ny fihetsika toy izany dia eo amin'ny faran'ny governemanta federaly.
Ny ben'ny tanànan'i Honolulu, Kirk Caldwell dia namporisika ny besinimaro hampiasa ny Hawaii Shaka ho fiarahabana fa tsy ny tànana. Ny famantarana shaka, fantatra amin'ny anarana hoe "mihantona" ary any Afrika Atsimo amin'ny anarana hoe "tjovitjo", dia fihetsika maneho finiavana finamanana mifandraika matetika amin'ny Hawaii sy ny kolontsain'ny surf.
Azo antoka fa tsy ho vonona amin'ny valanaretina miely i Hawaii. Ny rafi-pitsaboana any amin'ny Fanjakana dia efa mavesatra loatra ary matetika tsy mifandanja amin'ny fotoana ara-dalàna. Ny 5 amin'ireo tranga tsara COVID-19 dia nankany amin'ny dokotera Urgent Care ary voamarina fa diso ary mamela ny marary hamoaka olona maro kokoa amin'ity virus ity.
Nilaza ny manam-pahaizana fa raha mamela ny visors ho tonga any Hawaii hatrany, dia tsy ny mpitsidika ihany no ho tandindomin-doza.
Orinasa lehibe i Hawaii fizahan-tany. Izy io no tena mpandraharaha sy mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny fanjakana. Saika feno mandritra ny taona ny trano fandraisam-bahiny ary manome isa ny taha. Mba hanomezana azy fotoana 30 andro fialan-tsasatra angamba no tsara indrindra hatao amin'izao fotoana izao. Raha mijanona ny hotely misokatra dia asiana loza ny mpiasa hotely. Tsy afaka misaraka amin'ny 2 metatra miala ny vahininy izy ireo, ary mila diovina ny efitrano.
Mandritra izany fotoana izany, ny firenena manontolo any Eropa, Amerika atsimo, azia ary afrika dia mikatona.
Ny lehiben'ny Departemantan'ny Fahasalamana any Hawaii Dr. Anderson dia tsy nieritreritra ny fitiliana teny amin'ny seranam-piaramanidina fa valiny azo tanterahina noho ny fahamaroan'ny mpandeha tonga. Niangavy ny mpandeha izy tsy hiditra raha marary izy ireo.
Nangataka ny olom-pirenena tao Hawaii ny Governora mba tsy handeha any amin'ny faritra misy olona fantatra fa niely momba ny virus ny olona.
eTurboNews androany aloha dia mamoakad ny fahitana ny Robert Koch Institute fa ny valanaretina lehibe indrindra amin'ny fihanaky ny olona amin'ny Coronavirus any Etazonia dia hita any California, Washington, ary New York.
San Francisco, Los Angeles, San Diego, San Jose, Ontario any California; Seattle any Washington, ary New York City dia sidina tsy miato ihany miala an'i Honolulu, Maui, Kauai na ny Island of Hawaii.
Ireo mpitsidika dia nitondra tranga Coronavirus efa tany Honolulu, Maui, Kauai. Ireo mpitsidika rehetra ireo dia nandeha fiaramanidina ara-barotra toa ny Hawaiian Airlines na United Airlines. Ireo mpitsidika voan'ny aretina dia nijanona tao amin'ny hotely fantatra toa ny Kauai Marriott na a Hotely honina ao Hilton i Waikiki.
Isaky ny nisy olona hita fa tsara ho an'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana COVID-19 dia nanao zavatra niezaka ny hahafantatra hoe iza ireo mpitsidika ireo no nifandray. Raha ny marina dia saika tsy ho vita izany amin'ny trano fandraisam-bahiny efa namidy na fiaramanidina feno entana.
Raha jerena ny tsy fantatra momba an'io virus io, ny fomba fiparitahany, ary ny ohatra navelan'ny firenena hafa sy Etazonia miady amin'ny firenena hafa, Hawaii dia tokony hanidy ny indostrian'ny mpitsidika tombony mandritra ny 2-4 herinandro. Tsy maintsy ataon'izy ireo izany mba hamonjy ny indostria mandritra ny fotoana maharitra ary hamonjy ny vahoaka Hawaii hiatrika toe-javatra ratsy kokoa.
Izany rehetra izany dia mety efa tara loatra, saingy ny fihetsika mahery vaika eo noho eo ve dia hampihena ny zavatra eo amin'ny faravodilanitra?
Amin'ny maha-mpijery ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany, ny seranam-piaramanidina manidy sy ny indostrian'ny mpitsidika ao Hawaii dia mety tsy hitranga mihitsy. Tsy hitranga izany noho ny hery ara-barotra sy ny fitaomana an'ity indostria ity any amin'ny State of Hawaii
Araka ny nolazain'ity mpanonta ity nandritra ny 30 taona. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Hawaii dia raharahan'ny tsirairay, na miankina amin'ny asanao ianao na tsia. Tokony hihaino ny olony i Hawaii.
Hanao ahoana ny indostrian'ny mpitsidika raha tsy vita izany?
Ny fanakatonana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Hawaii mandritra ny 30 andro dia mety ho fampiasam-bola tsara indrindra ho an'ny ho avy azo antoka azon'ity orinasa ity Aloha State
eTurboNews tsy navela nametraka fanontaniana - ary mbola maro ny fanontaniana.